Ukulungisa efulethini kuhlale kukuhlangenwe nakho nokucindezeleka, futhi lezi zimo zihlangene nazo zonke amalungu omndeni ahlala endlini. Kungani lokhu kwenzeka, futhi kungani isifiso sokuvuselela ikamelo lihlale lidala ukungezwani kwesifo? Konke lokhu kwenzeka ngoba ukukhanda akuyona umsebenzi olula, odinga ulwazi nolwazi oluthile. Sizozama ukwandisa ulwazi lwethu ensimini yokwakhiwa futhi siqonde ukuthi singabeka kanjani tile phansi.
Ngaphambi kokuba uhlanganyele ekubekeni kwesembozo sephansi, bheka ubuchwepheshe besinyathelo ngesinyathelo salolu hlelo. Lokhu kuzokuvumela ukuba ube nolwazi oluthe xaxa futhi ulungiselele kule ndaba, ngaphandle kwalokho, ube nemibono ethile mayelana nokuthi uzofinyelela kuphi, uzozizwa uqiniseka kakhulu.
Indlela yokubeka tile phansi?
Ngaphambi kokuqala inqubo yokubeka, kutuswa ukuba ulungiselele kusengaphambili. Okokuqala, susa isendlalelo esiphezulu saphezulu kuya kwesisekelo (amathayili, amabhodi ahlahliwe, njll). Emva kwalokhu, ngosizo lwesisombululo esikhethekile, kufanele uhambisane nazo zonke izindawo eziyinkinga. Futhi ngaphambi kokuba ubeke tile phansi, ungakhohlwa ukusakaza i-substrate yokungena amanzi.
Uma isembozo sakho sangaphambilini senziwe ngokhuni, udinga ukuqeda amabhodi abolile aphezulu, futhi ubeke esikhundleni esisha. Kumele kuqashelwe ukuthi ubuningi besilingeni abukho ngaphansi kuka-25 mm. Ngemuva kwalokho, indawo yonke ephansi kufanele ihlanzwe kahle, bese usebenzisa isisombululo (noma upende) ovikela ukuvikela ama-fungus nokubola, futhi emva kokumiswa okuphelele - ikhava ngokungena kwamanzi. Ngemuva kwaloko, kunesilinganiso esingamamitha angu-0.5 ububanzi kunconywa ukusakaza igridi yokwakha. Ukuze ugcine izinga elidingekayo, kungenzeka ukuba uhlakaze phansi phansi izingcezu ezincane zamatshe aqoshiwe, izitini noma izipikili. Khona-ke kuyadingeka ukuthululela umquba ngodaka olukhethekile bese ulinda isikhashana (cishe inyanga) ukuze phansi ume kahle.
Manje isisekelo sokugqoka sikulungele, noma kunjalo, somile futhi sihlanzekile. Sizokwazi ukuthola indlela yokubeka tile phansi. Ukuze ugweme ezinye izinto ezimangazayo ezingase ziphakame ngesikhathi sokufakwa, kuyadingeka ukuthi ubeke ngokuqondile lokho okushiwo endaweni elungiselelwe ngokuhambisana nephethini nesayizi oyifunayo. Lapha umbuzo ungase uphakamise: "Ungabeka kanjani i-tile phansi ngangokunokwenzeka?". Ukuze wenze lokhu, kufanele uthenge i-tile ehlanganisa ibanga lokuqala. Lokhu kuzokuqinisekisa ukuthi uhla olungenakuqondakalayo ngobukhulu nombala ohlosiwe. Uma uthenga lokhu, ungakhohlwa ukuthenga okungaphezulu kuka-5%.
Ngaphambi kokubeka tile phansi, kunconywa ukuba uhlakaze emaceleni. Lokhu kufanele kwenziwe ngendlela yokuthi i-tile ingafanelana ngokuphelele kubo, ngaphandle kokucubungula kanye nama-chips. Uma wenza umaka, kufanele kuqinisekiswe ukuthi izindawo eziqanjiwe azikho eduze nomkhathi wegumbi. Kungaba ngcono nakakhulu ukuwafaka eceleni kolunye uhlangothi, mhlawumbe, ukuze kungabonakali ngesikhathi esisodwa.
Ngemuva kwalokhu, sebenzisa ikhambi lokunamathela emithini encane ngokuhambisana nokumaka. I-tile ingcono ukuqala ukubeka ekhoneni lodonga, elibhekene nomnyango. Owokuqala kufanele abekwe esixazululweni futhi agxilwe nengcindezi encane. Khona-ke kufanele ubeke bonke abanye, uhambisane nemigqa emisiwe, kuze kube yilapho yonke indawo enekhambi ihlanganiswa.
Isigaba esilandelayo sihlanganisa amalunga. Ngokucophelela kakhulu, ngaphandle kokulahleka kwemifantu, sebenzisa isikhalabhu ngenjubho yenjoloba ukusebenzisa isisombululo esikhethekile. Ukungaphezu kwalo kungasuswa ngendwangu emanzi, kodwa kuphela kuze kube yilapho.
Ekupheleni komsebenzi wokubeka isembozo esingaphansi, sula umile ngendwangu eyomile kahle, ushiye emanzini.
Ngaphambi kokuba uqale ukubeka amathayili ngokwakho, kufanele uzijwayele izincomo zokusebenza kwalesi sibopho, ikhambi lokunamathisela, njll. Lokhu kuzogwema izinkinga emsebenzini nasemaphutha.
Konzhakovsky Stone - ngokubabazekayo izintaba